Dr Casper Schmidt oo ku saabsan Dhibaatada Habdhaqanka Galmada ee Isku Qasan
Bogga ugu weyn Blog Dr Casper Schmidt oo ku saabsan Dhibaatada Habdhaqanka Galmada ee Isku Qasan
adminaccount888 25th March 2021 News Latest
Baadhitaanka ugu weyn adduunka ee caafimaadka galmada ee 2019 wuxuu cadeeyay in kudhowaad 20% ragga inta udhaxeysa 15-89 sano jir ay daawadaan porno ka badan inta ay doonayaan. Inteena ugu badan, illaa xad, waxaan ku celcelinaa dabeecado qaarkood oo aan ognahay inay nafteenna wax u dhimayaan - laakiin maxay dadka qaarkiis ugu oggolaadaan in noloshooda lagu halaago balwadda?
Hadalkan ka socda TEDxAarhus, 2019, Casper Schmidt, wuxuu adeegsanayaa tusaalooyin nolosha dhabta ah oo wax ku ool ah, si loola wadaago sida maskaxdu isu beddesho muddo ka dib. Wuxuu sharaxayaa sida daawashada porno u noqon karto balwad. Fikradda shaqadiisa gudaha qabatinka mukhaadaraadka waxay ka timid xiisaha uu u qabo neerfaha, iyo sidoo kale hadal TED dhawr sano ka dib. Cajiibkii Casper ee maskaxda ayaa sii huriyay waxbarashadiisii ​​mowduucan, wuxuuna u horseeday natiijooyin cajiiba Wuxuu cilmi-baare ka ahaa Jaamacadda Cambridge sidoo kale. Iyada oo ku saleysan cilmi baaristiisa cilmu-nafsiga, Casper Schmidt wuxuu aasaasay qaar ka mid ah calaamadaha neerfaha ee ugu horreeya ee balwadda. Bishii Juun 2018 shaqadiisu waxay ku biirisay in lagu daro liiska cudurada ee Ururka Caafimaadka Adduunka. Ciladda dabeecadda galmada ee qasabka ah ayaa albaabada u furtay daaweyn loogu talagalay kooxdan shakhsiyaadka isticmaalka sigaarka ah.
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan cilmi baarista, fadlan eeg Schmidt, Casper, Laurel S. Morris, Timo L. Kvamme, Paula Hall, Thaddeus Birchard, iyo Valerie Voon. "Dabeecadaha galmada ee qasabka ah: mugga hordhaca iyo mugga iyo isdhexgalka." Maqnaanshaha Maskaxda Aadanaha 38, maya. 3 (2017): 1182-1190.
Casper Schmidt wuxuu leeyahay taariikh PHD ah oo ku saabsan cilmiga neerfaha iyo waa cilmu-nafsi yaqaan. Hadda wuxuu ka shaqeeyaa kaaliyaha borofisarka cilmu-nafsiga ee cilmiga caafimaadka ee Jaamacadda Aalborg, Danmark. Casper wuxuu hadalkan ka jeediyay munaasabad TEDx ah isagoo adeegsanaya qaabka shirka TED laakiin si madax banaan ayay u abaabuleen bulshada deegaanka. Wax dheeri ah ka baro https://www.ted.com/tedx.